Anyị na- » AquaLuz
M rara AquaLuz m nkụzi Saul David Raye na Miguel Angel ndị nyeere m aka-enwe mmetụta na-eso ọhụụ a nke na-agwọ, a version nke mbara ntinye. Na, n'ezie, M rara AquaLuz na nne – Lakshmi, Country, Ixmel, Pachamama, Mama Mary, Ishtar, na ndị niile ọzọ nne nke anyị niile.
Fukushima kemgbe dragọn ahụ na edemede m ihe ize ndụ ma na ọrịa na-ebu ya na anyị Earth si na mmiri. All mmiri na Earth jikọọ na-agwọ anyị obodo mmiri, anyị gwọọ ndị nile mmiri, gụnyere Pacific oké osimiri.
AquaLuz na a zuru ụwa ọnụ ememe na-ewetara anyị ọnụ na ebumnuche, vibration, ekpere, na incarnation nke ìhè – kristal. Ị pụrụ ịmalite ugbu a iji nwee ume gị kristal na gị onwe gị na-ekpe ekpere, chants, ebumnobi nke mere na mgbe anyị na-edebe ha ọnụ na Earth si na mmiri, ha ga-ịhụnanya anyị ma na-agwọ ike. Anyị ga-edebe ha n'ime mmiri na Fall Equinox Iv na chant 'om Mani Padme Hum’ – ịtụkwasị obi anyị ume n'ime mmiri, na ọla n'ime Lotus.